IHuawei ibambe isabelo sentengiso esingama-20% eYurophu | I-Androidsis
IHuawei ithengisa enye kwii-smartphones ezintlanu eYurophu
U-Huawei uqale unyaka ngeenyawo zasekunene. Umenzi waseTshayina uthengise kakuhle kwikota yokuqala yonyaka, ukuba luphawu olukhule kakhulu kwaye iya isondela ngakumbi kwi-Samsung kolu luhlu. Ukongeza, ukumangaliswa kwabaninzi, nakwicandelo lamacwecwe kwi-Android kuye kwaqala unyaka kakuhle, yeyona ithengiswe kakhulu kwikota yokuqala yalo nyaka.
Ngoku, sinedatha kwintengiso yefowuni kwinqanaba laseYurophu. Amanye amanani apho iHuawei ibuyela khona ukuze ibe neziphumo ezilungileyo, kuba inkampani inoxanduva enye kwiifowuni ezintlanu ezithengiswa eYurophu. Ke ubukho bayo bukhulu ngakumbi kunangaphambili.
Ukuthengiswa kweefowuni kuye kwawa kangangeminyaka embalwa, into uninzi lweemarike kwimarike ezisokolayo. Nangona kukho abanye abaxhasa le meko kakuhle, ngakumbi kuba bafumana ukonyuka okubonakalayo kwintengiso yabo kwiimarike zamanye amazwe. Le yimeko yeHuawei, Xiaomi kunye neNhlonipho. Eyokuqala iphumelele isabelo sentengiso se-19,9%, ngokukhula ukuya kuthi ga kumanqaku amane xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. Iqhutywa kukuthengisa kumazwe aseYurophu afana neSpain, UK, Italy, France ne Germany.
UXiaomi uyiqalisile kakuhle le 2019 kwimarike yaseYurophu. Uphawu lwesiTshayina luphakama ngamanqaku eepesenti ezi-4 kwintengiso yalo, ukuze babe nesabelo sentengiso se-8,6%. Olu luphawu olubalulekileyo lwentengiso, olubona ubukho bayo bunyuka, ngakumbi iimarike ezinje ngeSpain ne-Italiya ezonyusa ukuthengisa kwayo. Imbeko ikhulile, nangona ibisincinci, ukuma kwi-4,5% yesabelo.
Into enomdla kwimeko yeYurophu kukuba kukho ezinye iimarike eziphambili, ezinceda iimveliso ezinje ngeHuawei ukuba zithengise ngakumbi. Le yimeko yeSpain neFrance, apho ukuthengiswa kwezi brand kuye kwanda. Eyona nto ibanceda balawule imarike. Nangona kunjalo, ingxelo ikwaphawula ukuba ukuqonda ngokubanzi kweempawu zaseTshayina kuncitshiswe kakhulu. Oku kunyanzela ii-brand ukuba zakhe umfanekiso kunye nobukho kwezi marike.
Ngaphandle kwamathandabuzo, ezi ziidatha zomdla omkhulu, ezenza ukuba kucace inkqubela phambili enkulu eyenziwe ziimpawu zaseTshayina eYurophu. IHuawei yeyona iluncedo kakhulu. Ukongeza kokulawula kwimakethi yaseTshayinaIkwaluphawu lwaseTshayina oluthengisa kakhulu ngaphandle kwelizwe lalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IHuawei ithengisa enye kwii-smartphones ezintlanu eYurophu
UGoogle Gcina sele enemowudi emnyama
I-OnePlus 7 Pro iyimpumelelo ekubhukeni